Ny fialam-boly & fandraisam-bahiny dia mitentina 39% amin'ireo asa very tamin'ny areti-mandringana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Ny fialam-boly & fandraisam-bahiny dia mitentina 39% amin'ireo asa very tamin'ny areti-mandringana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny angon-drakitra farany dia mampiseho fa ny mpiasa manao fialam-boly sy fandraisam-bahiny dia manimba tena amin'ny indostria rehetra hatreto
Ny fahaverezan'ny asa amin'ny fialam-boly & fandraisam-bahiny dia mitombo isa amin'ny isan'ny indostria voa mafy indrindra
Asa 61,000 very tamin'ny sehatry ny Leisure & Hospitality tamin'ny volana lasa
16% ny tahan'ny tsy an'asa amin'izao fotoana izao ao amin'ny Leisure & Hospitality dia efa ho avo telo heny noho ny tahan'ny tsy an'asa amerikana amin'ny ankapobeny
Saika efatra amin'ny 10 amin'ireo asa amerikana very rehetra nanomboka ny volana feb tamin'ny taona lasa teo dia tao amin'ny indostrian'ny Leisure & Hospitality, araka ny fanadihadiana ny tatitra momba ny asa nasionaly an'ny departemantan'ny asa farany - telo ny isan'ny indostria voa mafy indrindra.
Ireo asa 49,000 XNUMX kely natsangan'ny toekarena amerikana tamin'ny volana janoary dia noheverin'ireo mpahay toekarena ho fahadisoam-panantenana sy fambara lehibe iray haharetana Covid-19 ny adin-tsaina mifandraika amin'ny valanaretina amin'ny tsenan'ny asa. Saingy raha ny fanadihadiana natao ho an'ny Fikambanan'i Etazonia Travel an'ny orinasan'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, fizahantany momba ny fizahan-tany dia ny asa 61,000 very lanin'ny Leisure & Hospitality tamin'ny volana lasa teo. Etazonia dia mety hahazo asa 110,000 amin'ny ankapobeny raha tsy nihena ny asan'ny Leisure & Hospitality.
Volana faharoa nisesisesy izao, very asa ny sehatry ny fialam-boly & fandraisam-bahiny na eo aza ny vola azon'ny mpiasa amerikana amin'ny ankapobeny.
Ny isa hafa dia manasongadina ny toe-javatra mampahonena indrindra amin'ny Leisure & Hospitality raha ampitahaina amin'ny toekarena amerikanina sisa tavela:
Ny 23% amin'ny asa fialam-boly & fandraisam-bahiny very nanomboka tamin'ny volana febrily 2020 dia saika avo roa heny amin'ny indostria miaraka amin'ny taha-pahavoazana asa ratsy indrindra (fitrandrahana sy fitrandrahana ala, 12%).
Ny fizarana 39% an'ny fialam-boly & fandraisam-bahiny amin'ny asa rehetra ananan'i Etazonia dia avo telo heny noho ny indostria manana ny anjarany faharoa (governemanta, 13%).
Ny tahan'ny tsy fananan'asa 16% amin'izao fotoana izao ao amin'ny Leisure & Hospitality dia saika intelo heny noho ny tahan'ny tsy an'asa amerikana amin'ny ankapobeny (6%).
"Mora dia mora ny matematika: tsy hiverina amin'ny laoniny ny toekarena amerikana raha tsy miverina amin'ny laoniny ny sehatry ny fialam-boly & fandraisam-bahiny, ary handray fepetra politika henjana izany", hoy ny filoham-pirenena sy ny CEO an'ny AS Travel Association Roger Dow. “Mila atao laharam-pahamehana ho an'ny firenena ny famerenana amin'ny laoniny soa aman-tsara ny fandehanana, izay midika fa tsy ny fepetra fanampiana ihany fa ny fanindriana hatrany amin'ny vaksiny ary ny fanamafisana hatrany ny fomba fanao ara-pahasalamana tsara indrindra. Olana be loatra io olana io, miaraka amin'ny governemanta, ny indostria ary koa ny vahoaka manana andraikitra lehibe. "
Ny US Travel dia nandray anjara tamin'ny Kongresy sy ny fitondran'i Biden miaraka amin'ny laharam-pahamehana fanampiana hanampiana ny fanafainganana ny fanombohana ny fanarenana:
Manitatra sy manatsara ny Program Paycheck Protection hanomezana antsapaka fahatelo ho an'ireo orinasa izay miatrika olana hatrany noho ny COVID-19.
Manomeza vola fanampiana ho an'ireo sehatra voa mafy ao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany.
Manomeza vola $ 2.25 miliara amin'ny fanampiana EDA hampiroboroboana ny fomba fitetezana azo antoka sy mahasalama.
Manomeza $ 17 miliara ho fanampiana fanampiny ho an'ny seranam-piaramanidina ara-barotra sy ny seranam-piaramanidina.
Ilaina ny paikady fanarenana fanampiny hanafohezana ny vanim-potoana fanarenana ny indostria ary hamerenana amin'ny laoniny ny asa amerikana haingana kokoa:
Omeo tosika ny hetra hanohanana ny famerenana amin'ny laoniny ny asan'ny dia.
Ampio ny orinasam-pitaterana handoa ny vidin'ny ezaka fisorohana COVID-19.
Manome fanantenana kely ny vaksiny, hoy i Dow - saingy niadana ny fanatanterahana. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy ireo mpiasa an-tapitrisany miantehitra amin'ity indostria ity-dia hanohy mila fanampiana mandra-pahatongan'ny fameperana ny dia ary hatoky ny amerikana amin'ny fiverenan'ny dia, hoy izy.
"Mbola misy ny tsy fantatra momba ny fotoana hanombohan'ny fitsangantsanganana am-pahavitrihana," hoy i Dow. "Ny tena fantatra dia ny fiatraikan'ny valanaretina amin'ny fitsangatsanganana mitohy miteraka fahasimbana ara-toekarena sy asa, ary ny fomba tokana hanitsiana izany dia amin'ny alàlan'ny hetsika mahery setra."